Ilhaan Cumar oo Sharci ka Dhan Ah Trump Barlamaanka Horgeysey”Trump Maraykanka Cadaan Bes Inuu ka Dhigu Rabaa” | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Ilhaan Cumar oo Sharci ka Dhan Ah Trump Barlamaanka Horgeysey”Trump Maraykanka Cadaan Bes Inuu ka Dhigu Rabaa”
Madaxweynaha Maraykanka waxa uu dagaal kale ku qaaday Xildhibaanadda Haweenka aan asal ahaan u dhalanin dalkaasi ee xubnaha ka ah Kongareeska dalkaasi, isagoo sheegay inay yihiin rabshad-sameeyayaal, waa sida uu hadalka u dhigay.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in haweenka midabka leh ee ka tirsan Kongareeska loogu baahan yahay inay dib ugu laabtaan dalalkii ay ka kala yimaadeen.
Trump waxa uu is-illowsiiyey inay xaqiiq ahaan Haweenkaasi dhamaantooda yihiin Muwaadiniin Maraykan (American citizens), iyadoo mid ka mid ah ay ku dhalatay gudaha Maraykanka.
Xildhibaanadda Xisbiga Dimuqradaiga ee uu ku xad-gudbay Trump ayaa waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo Soomaali ah, lagana soo doortay Gobalka Minnesota, Rashiida Talayb oo asal ahaan Falastiiniyad ah, lagana soo doortay Gobalka Michigan iyo Ayanna Soyini Pressley oo ah Maraykanka Madow lagana soo doortay Gobalka Massachusetts.
Ilhan Omar oo ah qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah iyo Haweeneydii ugu horreysay ee Muslimad ah ee xubin ka noqota Kongareeska Maraykanka waxay ku dhalatay Somalia, balse, waxay inta badan xilligii carruurnimadeeda ku soo qaadatay Xero Qaxooti oo ku taalla Kenya, waxayna Maraykanka tagtay sannadkii 1997-dii, iyadoo iyadoo 12-jir ah.
Ilhan Omar waxay si kulul u naqdisay hadalkii Trump ee ku takoorayo Haweenka ka tirsan Kongareeska ee asal ahaan aan u dhalanin Maraykanka.
“Md. Madaxweyne, Dalka aan ka imid iyo dalka aan u wada dhaaranay waa Maraykanka” ayey Ilhan Omar ku soo qortay Twitter-keeda.
Waxayna sii raacisay: “Waad caraysan tahay, waayo, ma ictiqaansanid Maraykan aan ka mid nahay, waxaad ku kalsoon tahay Maraykan aad ku baqdin gelisay waxaad xaday”.
Ilhan Omar waxay kaloo sheegtay inuu Madaxweyne Trump ka caraysan yahay in dadka annagoo kale ee ka shaqeynaya gudaha Kongareeska ee ka dagaalamaya Ajeendahiisa nacaybka miiran.
Haddaynu ku laabano Twitterka qadafka leh ee uu Trump sida darandooriga u soo dhigay Bartiisa Twitterka waxaan shaki ku jirin isagoo niyadda ka haya Ilhan Omar uu muujiyey in aad loo danaynayo in la arko Haweenka ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ee wax horumarinaya, kuwaasi oo asal ahaan ka yimid dalal ay Dowladahooda dhamaantoooda aad u xun, aad u musuq badan oo aan wax waxtar ah ku lahayn Caalaamka, haddii ay ka jiraan Dowladdo si fiican u shaqeynaya, waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, Twitterka Trump waxa uu abuuray mowjado dhaleecayn ka imaanaysa Xisbiga Dimuqraadiga, kuwaasi oo is-barbar taagay Haweenka Xildhibaanadda ee uu Trump u gefay.
Afhayeenka Aqalka Kongareeska, Nancy Pelosi waxay sheegtay inuu Trump doonayo inuu Maraykanka mar kale caddaan ka dhigo.
Qoraal ay Nancy Pelosi soo dhigtay Brateeda Twitter-ka waxay Hadalka Trump ku sheegtay mid Faquuq ama Isir-nacayb ka dhan ah Shisheeyaha, qeybna uu ka yahay qorshaha Hal-ku-dhigiisa ahaa” Mar kale, Maraykanka ka dhigo wax weyn”.
Previous articleMaamulka Muuse Biixi oo ka Qeyliyey Farmaajo
Next articleDAAWO:- Dhulgariir baaxadleh oo ku dhuftay Deegaano katirsan Puntland + Cabsi badan oo jirta.